Qaar ka mid ah shaqaalaha hay’adda dowladda oo tababbar uga furmay Muqdisho | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Qaar ka mid ah shaqaalaha hay’adda dowladda oo tababbar uga furmay Muqdisho
Qaar ka mid ah shaqaalaha hay’adda dowladda oo tababbar uga furmay Muqdisho
Tababbarkaan Tayeynta shaqaalaha Dawladda ayaa waxaa ka qaybgelaya in ka badan 100 Shaqaale oo ka kala socda qaar ka mida hay’adaha Dawladda, waxaana uu soconayaa muddo shan cisho, iyadoo ay si Wadajir ah u soo qabanqaabiyeen Dawladda Soomaaliya iyo Bankiga Adduunka.
Xiriiriyaha Mashruuca Tayeynta Hay’adaha Dawladda Cumar Maxamed Cabdi ayaa sheegay in tabbarkan uu yahay mid lagu xoojinayo aqoonta shaqaalaha, ayna joogteyn doonaan siminaarada nuucaani oo kale ah.
Wasiirudawlaha Wasaaradda Waxbaarashada hidaha iyo Tacliinta Sare Cabdiraxmaan Maxamuud Cabddulle Jaabir ayaa sheegay in Wasaaraddu ay door muhiim ah ka qaadan doonto tayaynta iyo sare u qaadidda aqoonta shaqaalaha hay’adaha dowladda.
Wasiirka Wasaaradda Shaqada iyo Arrimaha Bulshada Saalax Axmed Jaamac oo furay tababarka ayaa kula dardaarmay ka qaybgalayaasha in ay ka faa’iideystaan tababbarka muddada shanta cisho ah ee uu socon doono.
tababarada nuucaani oo kale ayaa ah kuwa dhiiri gelin u noqon kara shaqaalaha hay’adaha dowladda,
Previous articleWasiirka Amniga oo xariga ka jaray hab-raaca qaadashada baasaboorka
Next articleMadaxweynaha iyo R/wasaaraha oo Xidigle Faa’isa u balan qaaday Caafimaad Dibadda ah